ज्योति विकास बैंकको नाफा रु. ६०.२५ करोड, ईपीएस २५.६१%ले बढ्यो Bizshala -
ज्योति विकास बैंकको नाफा रु. ६०.२५ करोड, ईपीएस २५.६१%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ६० करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन सफल भएको छ।
आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको समीक्षा अवधिसम्मको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ३८.१९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो।
बैंकको सञ्चालन मुनाफा पनि ३८.२४ प्रतिशतले बढेर ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ भएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म यस्तो मुनाफा ६२ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।
समीक्षा अवधिसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने ६.३३ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब १ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको यस्तो आम्दानी १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकले ४५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने कर्जा लगानी २९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
रिजर्भको आकार ३०.०३ प्रतिशतले बढेर ८५ करोड २१ लाख रुपैयाँको उचाइमा पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म रिजर्भमा ६५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
बैंकले खराब कर्जा पनि २३.६८ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ। गत वर्ष ०.७६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जाको दर समीक्षा अवधिमा घटेर ०.५८ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ। बैंकको आधार दर पनि ११.१६ प्रतिशतबाट घटेर ८.५७ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २५.६१ प्रतिशतले बढेर २०.८९ रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ईपीएस १६.६३ रुपैयाँ रहेको थियो।
पीई रेसियो १२.७३ गुणा रहेको बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३३.५३ रुपैयाँ रहेको छ।
jyoti bikas bank limited Q3 2077/78
बिजनेस ग्रोथमा आक्रामक गरिमा विकास बैंकको नाफा ३६.६३%ले बढ्यो,
काठमाण्डौ । कोरोना कहरबीच व्यापार विस्तारमा आक्रामक दे�...
महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफा रु. ४०.३६ करोड, रिजर्भमा १०.२२%को
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म महालक्ष्मी...
तेस्रो त्रैमासमा कामना सेवा विकास बैंकको आकर्षक प्रगति,
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कामना सेवा विकास...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले ३०% हकप्रद जारी गर्ने, बिक्री
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले निष्कासन गर्न लागेको ३०...
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको एजीएमबाट लाभांश अनुमोदन, दुई सञ्चालक
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको लाभांश पारित गर्दै ग्रीन डेभलपमेन्ट...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष...
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चलेको मर्जरको लहरले सदस्य...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको एजीएमबाट लाभांश अनुमोदन
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आज सम्पन्न १६ औँ...